LED အီလက်ထရွန်နစ်ဖန်သားပြင်ကြီး၏တောက်ပမှုအညွှန်းကိုဆုံးဖြတ်ပါ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
၏ကြိမ်နှုန်းအတွက်တိုးနှင့်အတူ LED ဒီဂျစ်တယ်ဖန်သားပြင် ငါတို့ဘဝအတွက်, LED အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုနံရံ၏လည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လိုအပ်ချက်မှာလည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်. ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချသောနံရံများအတွက် LED အလင်းထုတ်လွှတ်သောမီးခွက်များ၏အရည်အသွေးသည်မညီမညာဖြစ်နေသည်, နှင့်တောက်ပအာမခံချက်မပေးပါ. စတိုးဆိုင်အမျိုးမျိုးတွင် 1400-1600MCD တောက်ပမှုဖြင့်မှတ်သားထားသည့်အလင်းထုတ်လွှတ်သော diodes အတော်များများသည်သတ်မှတ်ထားသောတောက်ပမှုကိုမရရှိနိုင်ပါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကညံ့ဖြစ်ကြသည်. အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုစားသုံးသူလှည့်ဖြား. လူအများစုသည် LED အလင်းထုတ်လွှတ်သောပြွန်၏အရောင်တောက်ပမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ. ထို့ကြောင့်, ကုန်သည်များကအရောင်တောက်ပသည်ဟုဆိုကြသည်. တောက်ပမှု၏အရွယ်အစားသည်ကြီးကြီးမားမားကြီးကြီးမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, သင့်လျော်သောတောက်ပမှုသည်မျှော်လင့်မထားသောရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်.
1. အလင်းထုတ်လွှတ်သော Diodes များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူသော 3V DC ပါဝါထောက်ပံ့ရန်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါ, ဖြစ်နိုင်ရင်ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုပြီး. သငျသညျခလုတ်နှစ်ခုဘက်ထရီကိုသုံးနိုင်သည်, သူတို့ကိုသေးငယ်သောပလပ်စတစ်ပြွန်ထဲထည့်ပြီးအပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုကိုထုတ်ယူပါ. အဆုံးကိုတိုက်ရိုက် shrapnel နှင့်အတူ switch ကိုသို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. အသုံးပြုတဲ့အခါ, အဆိုပါအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောစုံစမ်းစစ်ဆေးအလင်း - ထုတ်လွှတ် diode ၏အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာကိုက်ညီတဲ့. အနုတ်လက္ခဏာ pin ပေါ်မှာ, အဆုံးမှာခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဖိထားပါ, နှင့်တောက်ပပြွန်အလင်းထုတ်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်.
2. ဒုတိယအချက်, ရိုးရှင်းသောအလင်းတိုင်းတာခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် photoresistor နှင့် digital multimeter တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ. photoresistor ကိုပါးလွှာသောဝါယာကြိုး ၂ ခုဖြင့် ဦး ဆောင်။ ဒီဂျစ်တယ် multimeter ၏ဘောပင်နှစ်ခုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ. multimeter ကို 20K နေရာတွင်ထားရှိသည် (အဆိုပါ photoresistor ပေါ်မူတည်။, စာဖတ်ခြင်းကိုတတ်နိုင်သမျှတိကျသေချာအောင်ကြိုးစားပါ). တိုင်းတာထားသောတန်ဖိုးသည် photoresistor ၏ခုခံနိုင်မှုတန်ဖိုးဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ, အလင်းကတောက်ပတယ်, တန်ဖိုးနည်းလေ.
3. LED light-emitting diode တစ်ခုကိုယူပြီးအထက်ပါ 3V current current ကိုအသုံးပြုပါ. အလင်းထုတ်လွှတ်သောခေါင်းသည်မျက်နှာကြက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော photosresistor ၏မျက်နှာပြင်နှင့်နီးသည်. ဒီအချိန်မှာ, multimeter သည် LED ၏တောက်ပမှုကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်.
2. Brightness ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုအဆင့်သည်ပုံရိပ်၏အတောက်ပဆုံးအဆင့်မှလူ့မျက်လုံးခွဲခြားနိုင်သည့်အဖြူရောင်အထိဖော်ပြသည်။.
မီးခိုးရောင်အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏မီးခိုးရောင်အဆင့်အလွန်မြင့်မားသည်, အရာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 256 သို့မဟုတ်ပင် 1024. သို့သော်, လူ့မျက်စိ၏တောက်ပမှုအပေါ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ဒီမီးခိုးရောင်အဆင့်ဆင့်ကိုအပြည့်အဝအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ. ဆိုလိုသည်မှာ, ဒါကြောင့်များစွာသောကပ်လျက်မီးခိုးရောင်စကေးလူ့မျက်စိ၏တူညီသောကြည့်ရှုဖြစ်နိုင်သည်. ထို့အပြင်, မျက်စိ၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်သည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားသည်. ပြသမှုမျက်နှာပြင်အဘို့, လူ့မျက်စိအသိအမှတ်ပြုမှုအဆင့်မြင့်, ပိုကောင်းလေ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြထားတဲ့ပုံကလူတွေအားလုံးကိုကြည့်ဖို့ပါ. လူ့မျက်လုံးခွဲခြားနိုင်သည့်တောက်ပမှုအဆင့်များလေ, display ရဲ့အရောင်အာကာသပိုကြီးလာတယ်, ကြွယ်ဝသောအရောင်များကိုပြသရန်အလားအလာပိုကြီးသည်. တောက်ပမှုခွဲခြားမှုအဆင့်ကိုအထူးဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြင့်စမ်းသပ်နိုင်သည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, Display မျက်နှာပြင်ရောက်ရှိနိုင်သည် 20 အဆင့်များသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို, ဒါကြောင့်အဆင့်မြင့်လျှင်ပင်.
3. Brightness နှင့်ကြည့်ရှုရန်အတွက်လိုအပ်ချက်များ:
အရောင်အသွေးစုံလင်သော LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အရောင်သည် 800cd / m2 အထက်ရှိရမည်, ထို့အပြင်မျက်နှာပြင်အပြည့်အ ၀ အရောင်တောက်ပမှုသည်မျက်နှာပြင်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန် 1500cd / m2 အထက်တွင်ရှိရမည်, မဟုတ်ရင်ပြသထားတဲ့ပုံရိပ်ဟာသိပ်ကိုနိမ့်တဲ့အတွက်ရှင်းလင်းမှာမဟုတ်ဘူး. အလင်း၏အရွယ်အစားကိုအဓိကအားဖြင့်သေဆုံးသောအရည်အသွေး၏အရည်အသွေးဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်. ကြည့်ရှုထောင့်၏အရွယ်အစားသည် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ပရိတ်သတ်အရေအတွက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်, ဒီတော့ပိုကြီးလေပိုကောင်းလေ. အဆိုပါကြည့်ရှုထောင့်အဓိကအားဖြင့်သေအထုပ်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်.
LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏အရောင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်လိုအပ်သည်. မြို့ပြအလင်းအတွက် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏လက်ရှိတောက်ပမှုလိုအပ်ချက်များ, သို့မဟုတ်အသစ်သောစည်းမျဉ်းများ, LED မျက်နှာပြင်၏အရောင်သည်အလွန်မြင့်မားသည်, အနီးအနားရှိနေထိုင်သူများကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မည်. မကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်.
ကြော်ငြာခြင်းအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာသော LED display နံရံ၏ application fields
အပြင်ဘက်တွင် LED ရေစိုခံနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်သည်စွမ်းအင်ချွေတာသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်